China Universal Glue / Super SBS Zvese-chinangwa General Adhesive Glue fekitori nevatengesi | DESAY
Magadzirirwo: 0.125L, 600ML, 15L
Ruvara: yero yakajeka
Solid zvemukati: ≥45%
(1) prereatment: tanga kuchenesa iyo yekubatanidza pamusoro. Mutsa iyo glue zvakanaka.
(2) sizing: sizing pane maviri ekumisikidza nzvimbo, glue kuomesa 10 ~ 20 mapoinzi.
(3) kurapa: namatidza mushure mekutsikirira kwenguva yakati .. Cherekedza kufefetedza.
(4) Mushure mekutora iyo glue, isa chisimbiso panguva yekudzivirira kuoma uye ganda, izvo zvinokanganisa kushandiswa kweinotevera glue.
Chigadzirwa zita rekunamatira kwepasirese
Iyo SBS modhi
Ruvara rwekunze rwakareruka yero
Kuporesa huwandu hwe45% kana hwepamusoro
Kurapa nguva inopfuura maminetsi maviri
Magadzirirwo:0.125L, 600ML ，15L PH:6-7
Ruvara: yakajeka yero Kurapa nguva：2min
Solid zvemukati： ≥45% Pasherufu hupenyu：Mwedzi gumi nembiri
Mimwe mirayiridzo: yakasimbiswa, yakachengetwa munzvimbo inotonhorera, isina mweya, yakaoma, kure nemhepo inopisa
0.125L, 600ML, 15L
Yakasimba yekutanga uye yekupedzisira adhesion (yakakwira diki yecolloidal silika bhiriji panguva yekuvaka kuverengera yakakwira uye yakapfava yekupedzisira viscosity)
Kugadzikana kwakanaka (shandisa yakasimba rin'i yerabha kuona hupenyu hwakareba hwebasa)
Inonyanya kushandiswa mukubatanidza simbi nemachira, mapurasitiki uye mapurasitiki, girazi nesimbi, dzakasiyana siyana rabha, pepa repurasitiki, huni, dehwe, plush, kork, PVC yakaoma nesimbi. Kwete kukodzera inochinjika PVC, PS furo, polyethylene.
Yakajairika mienzaniso: yekushongedza imba, yakapfava kushongedza zvinhu, kuputira zvipanji, aluminium-epurasitiki mapaneru, kuputira zvipikiri, zverabha zvisimbiso, dehwe, kuputira mabhokisi, nezvimwe.
1. Ndokumbirawo usanganise glue zvakaenzana usati washandisa;
2. Ndokumbirawo unamate chivharo mushure mekushandisa;
3. Iva nechokwadi chekuti nzvimbo yekushandira inofefetera zvakanaka uye hunyoro hwemhepo hushoma huri pasi pe80%;
4. Iyo yakakodzera tembiricha yekuvaka iri 20-30% ℃. Kana nharaunda ikapfuura iyo inoshanda renji, ndapota tsvaga zano rehunyanzvi. Iyo yakakwirira iyo hunyoro hwemhepo hunyoro, iyo yakadzika tembiricha uye yakareba iyo nguva yekumirira;
5. Dururira glue nemucheka wedonje nepeturu;
6, inofanirwa kuiswa kunze kwekusvika kwevana;
7.kuchengetedza uye kutakura kunofanirwa kuve kwakakwira kupfuura 5 ℃, kana paine chando chando unogona kuidziya zvishoma nezvishoma kune tembiricha yekuvaka, uye tembiricha yenguva dzose kwemaawa makumi maviri nemana, inogona kumutswa zvizere;
Iyo chena inonamira muchigadzirwa isimbi oxide, iyo inoita basa rekusimudzira muchigadzirwa uye haina kukanganisa kunamira kweglue.
Pashure: Terpene pinene resin glue zvinhu
Zvadaro: Mvura base bepa chubhu yakakosha glue
Fekitori yakananga kutengesa kwese glue
super SBS zvese-chinangwa zvakajairika kunamatira glue